भाङ्बारी: October 2012
म सहिदगेटमा माइक्रोबस चढें । मलाई कीर्तिपुर जानुथियो । ड्राइभरछेउमै सिट भेटें । दक्षिण पट्टिको खुलाचौरमा सैनिकपरेड चलिरहेथ्यो । खलाँसी त्यतैतिर टोल्हाएको देखेर डा्रइभर बाहिर निस्क्यो । गएर त्यसका कानमा क्याराम खेल्दा औंलाले स्ट्राइकरलाई धकेलेझैं हिर्काइदियो । त्यो चीर निद्राबाट एक्कासी ब्यूँझिएझैं भयो । त्यो केटो त्यस्तै तेह्रचौधको थियो । कान छाम्दै आत्तिएर कराउन थाल्यो- ”आउनुस ! आउनुस ! त्रिपुरेश्वर टेकु कालिमाटी अँ.... अँ.... कालिमाटीभन्दा उताका स्टेसनहरु बिसर्ियो । ड्राइभरले फेरि टाउकामा ठुङ्ग हान्दै छुटेका स्टेसनहरु सम्झायो- कुलेश्वर बल्खु कीर्तिपुर है कीर्तिपुर‘।” त्यति बिर्सिएकोमा त्यस केटोले धत् भन्दै आफ्नै हातले आफ्नै टाउकामा धारेहात लगायो र उसैगरी कराउन थाल्यो- “त्रिपुरेश्वर टेकु कालिमाटी कुलेश्वर बल्खु कीर्तिपुर है कीर्तिपुर । यात्रु खचाखच भइसकेकाले माइक्रो हिँडीसकेको थियो । त्यो केटो भने उसैगरी भनेको भन्यै भयो- “त्रिपुरेश्वर, टेकु.......” ।
त्यसको मूर्खता देखेर ड्राइभरले सडकतिर हेरीहेरी करायो- “कहाँ बीचबाटामा ढोका खुल्लै राखेको । ढोका लगाएर भित्र पस ! अहिले ट्राफिकले छेराउला पैसा” । त्यसले हत्तपत्त ढोका लगायो । र ढोका लगाइसकेर माइक्रोभित्रै पनि कराउन थाल्यो- “त्रिपुरेश्वर टेकु........
यो काम लाग्ने मान्छे हुँदैहोइन ” – ड्राइभरले आफैं खुइय गर्यो- “हरे ! भित्रै चिच्याएर नमर् न । स्टेसनमा मात्र कराउनु । “ए १ बिसे्रछु पो ।” त्यसले फेरि आफ्नै टाउकामा धारेहात लगायो । मैले पछाडि फर्केर त्यसलाई हेरें । त्यसले सबै यात्रुलाई हेर्यो जो यतिखेर उसैलाई हेरिरहेका थिए । आफ्नो मूर्खताप्रति लज्जित हुँदै मुखाकृति बिगार्यो । “नयाँ मान्छे राख्नुभएजस्तो छ नि " – मैले ड्राइभरलाई सोधें- “तालिमप्राप्त रहेनछ “